လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၁) - MoeMaKa Media
Home / Currents / Hla Kyaw Zaw / International / လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၁)
လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၁)
၂ဝဝ၄ ခုနှစ် အေသင်အိုလံပစ်ကာလ အမျိုးသမီးဘောလီဘော နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ဗိုလ်လုပွဲ ရုရှားအသင်းနဲ့ တရုတ်အသင်း တို့ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ပွဲ။ ပထမပွဲစဉ် နှစ်ပွဲကို ရုရှားအသင်းက ဆက်တိုက်နိုင်လိုက်ပြီး တတိယပွဲမှာလည်း ရုရှား ကပဲ အမှတ်ထက်ဝက်ကျော်ရနေပါပြီ။ ရုရှားအသင်း ရွှေတံဆိပ်ရဖို့ သေချာသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီအချိန်မှာပဲ တရုတ်အသင်းနည်းပြဆရာချုပ် ချင်က (Time-out) ခဏနားဖို့ ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့တပည့်မလေး တွေကို နင်တို့ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာလဲ။ တို့က ပွဲမစခင်ကတည်းက ငွေတံဆိပ်ကရပြီသားလေ။ ဘာပူစရာရှိလဲ။ ရွှေရ လည်း အမြတ်ပေါ့။ မရလည်း ဘာဖြစ်လဲ။ ငွေကရပြီးသားပဲ။ ဆိုပြီးတော့မှ တဦးချင်းလိုအပ်ချက်လေးတွေကို အသင့် အတင့်ပြောပြပြီး ပြန်ကစားစေပါတယ်။
ဆရာချင်က သူ့တပည့်တွေ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်လွန်ကဲမှုကြောင့် အစွမ်းအစတွေငုပ်နေတာ အကုန်ထုတ်မကစားနိုင်တာကို ရိပ်မိသိရှိပြီး အချိန်မီ သတိပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်လက် ပေါ့ပါးသွားတဲ့ တရုတ်အသင်းဟာ စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ မိမိ တို့အစွမ်းရှိသလောက် ကြိုးစားပမ်းစား ဆက်ကစားရာမှာ အဲဒီတတိယပွဲမှာ ကပ်နိုင်လိုက်ပြီး နောက်ပွဲဆက် နှစ်ဆက် ဆက် တိုက်နိုင်ပြီး ရွှေတံဆိပ်ကို ရသွားပါတော့တယ်။
ရုရှားအသင်းဟာ ပထမပွဲနှစ်ဆက်မှာနိုင်ပြီး တတိယပွဲဆက်မှာလည်း နိုင်ချေရှိနေတာကြောင့် စိတ်ပေါ့သွားတာကတကြောင်း၊ ရှုံးဖို့သေချာသလောက်နေဖြစ်နေတဲ့ တရုတ်အသင်းက သဲကြီးမဲကြီး ပြန်လှန်ကစားလာလို့ တုန်လှုပ်သွားပြီး ကယောင် ကတန်းတွေဖြစ်ကုန်တာကြောင့်တကြောင်း၊ ရွှေတံဆိပ်နဲ့လွှဲသွားရပါတယ်။ ရုရှားအားကစားသမားတွေ မျက်ရည်လည်ရွှဲ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ရုရှားအသင်း နည်းပြဆရာချုပ်က ချက်ချင်းနုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ပြီး ဒီလိုပြောသွားပါတယ်။
“ဒီအားကစားပညာတွေကို တို့ကတရုတ်တွေကိုသင်ပေးခဲ့တာ။ အခုတို့တွေက သူတို့တရုတ်တွေဆီက တချို့အရာတွေကို ပြန်သင်ရတော့မယ်” တဲ့။
ဒီမြင်ကွင်းလေးကတရုတ်တွေရဲ့ ဇွဲနဲ့ လူတိုင်းမှာငုပ်နေတတ်တဲ့စွမ်းရည်တွေကို ညှစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းပြသနေပါ တယ်။ တနည်းပြောရရင် တရုတ်တွေအနေနဲ့ တပည့်အဖြစ်ကနေ ဆရာအဖြစ်တက်ရောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ပြသနေပါ တယ်။
၁၉၇၈ ခုနှစ်ကစလို့ တရုတ်ပြည်ဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီဆိုတာချမှတ်ပြီး ခေတ်သစ်ခရီးလမ်းကြောင်း တခုတီထွင် ဖန်တီးလျှောက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ထိပ်ဆုံးခေါင်းဆောင် တိန်ရှောင်ဖင်ကစလို့ အဆင့်အသီးသီး ကနိုင်ငံရေးသမား တွေ၊ ပညာရှင်တွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ တကမ္ဘာလုံးအနှံ့ ခြေဆန့်ကြပြီး (သူတို့အခေါ်) လေ့လာရေးကြီး ကိုလုပ်ကြပြီး အတွေးအခေါ်အမျိုးမျိုး၊ နည်းပညာ နည်းနာအမျိုးမျိုးတို့ကို တိုင်းပြည်တွင်းပြန်သယ်လာကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဂျပန်နဲ့ ဂျာမဏီတို့က တရားဥပဒေဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်တွေ၊ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပက နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစနစ် တွေ စတာမျိုးတွေပါလာပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ကြပြီး တရုတ်ရဲ့ ထူးခြားမှုရှိတဲ့အခြေအနေများနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ တရုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပုံစံသစ်ကို စမ်းတဝါးဝါး ဖော်ဆောင်လုပ်ဆောင်လာကြရာမှာ အောင်မြင်မှုတွေ တ ဆင့်ပြီးတဆင့်ရ လာပြီးအခု တံခါးဖွင့်ပေါ်လစ်ီ အနှစ် (၄ဝ) ကြာပြီး တရုတ်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအင်အားဟာ ကမ္ဘာဒုတိယအင်အားကြီးနိုင်ငံ ဘဝကို ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။
ကမ္ဘာ့ဂလိုဘယ်လာဇေးရှင်းကြီးက အရှိန်ရနေချိန် အရင်းရှင်နိုင်ငံကြီးမျာမှာ အရင်းအနှီးတွေစုပုံနေပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ရှာဖွေနေချိန်နဲ့ရော သွားတိုက်ဆိုင်နေပြီး ဒီအခွင့်အရေးကို တရုတ်က မိမိရရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
တရုတ်က ဒီလိုတခြားနိုင်ငံများက အောင်မြင်မှုတွေကိုလေ့လာပြီး မိမိနိုင်ငံအတွက် သင့်တော်တဲ့ပုံစံ ဖော်ဆောင်လုပ်ဆောင် တာ (တနည်း) တရုတ်မှုပြုတာဟာ သူတို့လူမျိုးများရဲ့ ဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုလို့တောင် ပြောနိုင်နေပါပြီ။
အခု တရုတ်ပြည်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့စကားတရပ်ရှိပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ကို မော်စီတုန်းက မတ်တပ်ရပ်စေခဲ့တယ်။
တရုတ်ပြည်ကို တိန်ရှောင်ဖျင်က ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။
တရုတ်ပြည်ကို ရှီကျင့်ဖင်က အင်အားတောင့်တင်းစေတယ် ... တဲ့။
တရုတ်ပြည်သစ်ကို ၁၉၄၉ က တည်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဥက္ကဌမော်က မာ့က်စ်ဝါဒ လီနင်ဝါဒအပေါ်အခြေခံပြီး တရုတ်ပြည်ရဲ့ အခိုင်အမာအခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေကျစွာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ မော်အတွေးအခေါ်ဆိုတဲ့ တော်လှန်ရေးသဘောတရား တရပ်ကို တီထွင်ဖန်တီးပြီး လူထုတရပ်လုံး တော်လှန်ရေးထဲပါဝင်လာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ်တော့ မာ့က်ဝါဒကို တရုတ်မှုပြုခြင်းပါပဲ။
မော်ရဲ့ လက်တွေ့ကျမ်း၊ ပဋိပက္ခကျမ်း ဆိုတာတွေဟာ မာ့က်ဝါဒကို တရုတ်ပြည်သူတွေ အလွယ်တကူနားလည်သဘော ပေါက်အောင် ရှင်းလင်းသင်ကြားပေးချက်များသာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဒီစာတမ်းတွေဟာ ၁၉၄ဝ ခုနှစ်များက တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီဗဟိုရှိရာ ယင်အန်းက ဂျပန်ခုခံရေးတက္ကသိုလ်မှာ မော်ရဲ့ဟောပြောချက်များဖြစ်ပါတယ်။) ဒီလိုနည်းနဲ့ မော်ဟာ မာ့က်စ်ဝါဒကို တရုတ်ပြည်သူလူထုတွင်း ကျသွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်သစ်ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။
(မော်ရဲ့ လက်ရွေးစဉ်ကျမ်းများကို ကြည့်ပါ။ ကာလ ဒေသအလိုက် ဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကို တရုတ်ပြည်ရဲ့ အခိုင်အမာအခြေ အနေနဲ့ ကိုက်ညီစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြထားပြီး ရှေ့အလားအလာများကို တွက်ချက်ပြထားတာကိုရော၊ ဖြေရှင်းနည်းများကို ရော ဖော်ပြထားတတ်ပါတယ်။ အနုပဋိလောမကျစွာ ဘက်စုံဖော်ပြချက်များပါ။)
နောက်ပိုင်း တရုတ်ပြည်မှာ စီးပွားရေးအရနလံထူအောင် ဆက်လက်စွမ်းဆောင်သူကတော့ တိန့်ရှောင်ဖျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်ကစလို့ တရုတ်တပြည်လုံးက နေရာအသီးသီး အဆင့်အသီးသီးက သူများအားလုံး တကမ္ဘာလုံးအနှံ့သွားပြီး နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံ အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာပြီး တရုတ်ပြည်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီ ဆိုတာကို ကျင့်သုံးလာပါတယ်။ တကယ်တော့ အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ အလွန်အောင်မြင်နေတဲ့ ဂလိုဘယ်လာဇေးရှင်းကြီးကို တရုတ်မှုပြုခြင်းတရပ်ပါပဲ။
အခုလည်း ရှီကျင့်ဖင်က ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းကြီးဆိုတာကို ဖော်ဆောင်လာပြန်ပါပြီ။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှာကျရောက်တဲ့ စီးပွားရေးပျက်ကပ်ကြီးက ကျော်နင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက် တရုတ်ပြည်က နည်းလမ်းတွေ ရှာရာမှာ အရင်းရှင် ဂလိုဘယ်လာဇေးရှင်းကြီးကို ဆိုရှယ်လစ်ဂလိုဘယ်လာဇေးရှင်း (အနာဂါတ်တွေကိုမျှဝေထားတဲ့ လူ့ အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ရေး) နဲ့ အစားထိုးရေးစဉ်းစားချက်ပါပဲ။
တကယ်တော့ အရင်းရှင်ဂလိုဘယ်လာဇေးရှင်းရဲ့ မောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့် (Free Trade) ကို တ ရုတ်မှုပြုဖို့ ကြိုးစားကြည့်မှုတရပ်ပါပဲ။
တရုတ်ရဲ့လုပ်ဟန်များထဲမှာ လေ့လာအတုယူစရာတွေ များပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်လောက်အောင်မြင်တဲ့စနစ်ပဲဖြစ် ဖြစ် ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်ကူးချတာမလုပ်ပါဘူး။ ထို့အတူ စနစ်သစ်များကို ဖော်ဆောင်လုပ်ဆောင်ရာမှာလည်း စမ်းသပ် ကွက်များလုပ်ဆောင်ပြီး အချိန်ကာလအလိုက် (ဥပမာ ၆ လတကြိမ်) ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တာ အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေတာ အားလုံးဘက်စုံလုပ်ဆောင်ပြီးမှ ရေပက်မဝင်အောင်လုပ်ပြီးမှ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လုပ်ကိုင်တာပါ။
အခုလည်း ဒီပိုးလမ်းမစီမံကိန်းအသေးလေးတွေ ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာရော အတော်များများ ကွက်ကျား ကွက်ကျား လုပ်ပြီးနေဟန်ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို အခုအချိန်မှာစုစည်းပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်စီမံကိန်းအဖြစ် တင်လိုက်ပုံရပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီစီမံကိန်းကြီးဘယ်လိုပေါ်လာသလဲ။ အပိုင်း (၂) မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပါ့မယ်။
၅၊ ၅၊ ၂ဝ၁၉
Beijing Review.March 14,2019.
Lessons from Belt and Road.by Kerry Brown.
လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၁) Reviewed by Aung Htet on 5:16 PM Rating: 5